Ciidanka Kenya oo saldhig ka sameystay meel u dhow Ceelwaaq – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTACiidanka Kenya oo saldhig ka sameystay meel u dhow Ceelwaaq
Ciidanka Kenya oo saldhig ka sameystay meel u dhow Ceelwaaq
January 22, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Ciidamada dowladda Kenya ayaa sii wada culeyska ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed ee deggan Koofurta gaar ahaan Gobolka Gedo,halkaas oo bilihii la soo dhaafay Kenya ay dhul ballaarsi dhinacs sohdinta ah ka wadday.
Ciidanka Kenya, ayaa xalay saldhig ka sameystay Deegaanka Ceelqalaa oo 2km qura u jira Degmada Ceelwaaq, iyagoona gudaha u soo galay illaa 3km.
Korneyl Xasan Aadan Biixi oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ee Gobolka Gedo, ayaa xaqiijiyay in ciidan qalabeysan oo kuwa Kenya ahi, ay soo deggeen Deegaanka Ceelqalaa.
“Xuduuda Somaliya 3km ayay gudaha u soo galeen Ciidamada Kenya oo wata gaadiidka gaashaaman ee dagaalka, kuna hubeysan hubka culus. Saqdii dhexe ee xalay ayay fariisin ka sameysteen Deegaanka Ceelqalaa oo 2km u jira Degmada Ceelwaaq.” Ayuu yiri Korneyl Xasan Aadan Biixi.
Korneyl Xasan Aadan Biixi, ayaa sheegay Ciidanka Kenya ee soo degay Deegaanka Ceelqalaa inaanay qayb ka ahayn Ciidanka Kenya ee ka tirsan Amisom.
“Markii ay soo badatay dhibaatada Ciidamada Kenya ka wadaan Degmada Ceelwaaq, ayaanu la xiriirnay Saraakiisha Kenyanka ah ee qaybta ka ah Amisom, waxayna noo sheegeen inaysan ciidamadan ka tirsanayn Amisom, isla-markaana ay ka amarqaataan Madaxweynaha Kenya, ujeedadooduna ay tahay inay qas iyo fawdo sameeyan.” Ayuu yiri Korneyl Xasan Aadan Biixi.
Dadka reer Ceelwaaq, ayaa is weydiinaya sababta ay Madaxda Dowladda uga hadli la’yihiin fara-gelinta qaawan, ay ciidankan ka wadaan deegaanada xadka dhaca.
48,315 total views, 297 views today
48,315 total views, 297 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
48,387 total views, 297 views today
48,387 total views, 297 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
48,398 total views, 298 views today
48,398 total views, 298 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
48,419 total views, 297 views today
48,419 total views, 297 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
48,454 total views, 297 views today
48,454 total views, 297 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]